बाह्रखरी - नरेश फुयाँल बिहीबार, फागुन १३, २०७७
काठमाडौं । कलाकारहरु फुर्सदिला भएका हुन् कि आफ्नो पेसाप्रतिको वितृष्णा ? कलाकारहरु सञ्चारकर्ममा देखिन थालेपछि यो प्रश्न यतिबेला धेरैको दिमागमा उठेको हुनुपर्छ ।
नायक राजेश हमाल ‘को बन्छ करोडपति’ को प्रस्तोता हुन् । पहिलो सिजन होस्ट गरिसकेका हमाल यसको दोस्रो सिजन चलाउने तयारीमा छन् । उनले ‘जातको प्रश्न’ नामक अर्को टेलिभिजन कार्यक्रमको पनि होस्ट गरे । टेलिभिजनका कार्यक्रम सञ्चालनमा उनको राम्रै दिलचस्पी देखिन्छ ।
काँचको पर्दामा बाक्लै देखिने राजेश सेतो पर्दामा नदेखिएको भने थुप्रै भइसक्यो । ‘सकुन्तला’मा तेस्रोलिंगी महिलाको भूमिकामा देखिएयता उनलाई दर्शकले ठूलो पर्दामा देख्न पाएका छैनन् । भलै उनले केही समयअघि चलचित्र ‘सत्यम्’ साइन गरेका छन् । उनी अहिले म्युजिक भिडियोमा पनि देखिँदै आएका छन् ।
कलाकार दीपकराज गिरीलाई पनि अब टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा दर्शकले देख्न पाइनेछ । ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा दीपकराज ‘क्राइम पेट्रोल’ को होस्ट गर्नेछन् ।
हास्य कलाकार केदार घिमिरे पनि ग्यालेक्सी फोरकेमै कार्यक्रम होस्ट गर्ने तयारीमा छन् । तर, उनले कुन कार्यक्रम होस्ट गर्ने निश्चित भइसकेको छैन । “केदारजीले पनि कार्यक्रम होस्ट गर्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ । फाइनल कुरा भइसकेको छैन,” स्रोत भन्छ, “धेरै कुरा मिल्न बाँकी छ । यदि मिलेको अवस्थामा केदारजीले पनि कार्यक्रम होस्ट गर्नुहुनेछ ।”
ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको शुभारम्भ कार्यक्रममा मंगलबार केदार घिमिरे पनि उपस्थित थिए ।
सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे सञ्चार क्षेत्रमा नरहे पनि कलाकारिताभन्दा बाहिर समाजसेवामा छन् । ०७२ को गोरखा भूकम्पपछि उनीहरु बस्ती निर्माण तथा रंगशाला निर्माणमा छन् । अहिले धुर्मुस-सुन्तली चितवनमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिरहेका छन् । यो परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि आफ्नै पुरानै कर्ममा फर्किने सीतारामले बताइसकेका छन् ।
यसबीचमा उनले चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ निर्माण तथा अभिनय गरे भने ‘म त मर्छु कि क्या हो’ सिरिज निर्माण गरिरहेका छन् । छायांकन सकिए पनि प्रशारण हुन भने बाँकी छ ।
अभिनेत्री तथा निर्मात्री स्वेता खड्का पनि समाजसेवामै तल्लीन छिन् । सिन्धुपाल्चोकमा माझी बस्ती निर्माण गरिरहेकी छिन् । निर्माण सुरु भएको लामै समय बितिसके पनि यो बस्ती निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । आर्थिक अभावका कारण काम सकिन ढिलो भइरहेको छ । सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनेहरुले नै सहयोग रकम नदिएको उनले गुनासो गर्दै आएकी छिन् ।
कलाकारहरु आफ्नो मुख्य कर्म छाडेर अरुतिरै ‘बरालिएको’ टिप्पणी गर्नेहरु पनि बाक्लै छन् । विशेषगरी सहयोग घोषणा गर्नेहरुले रकम उपलब्ध नगराएको, परियोजनाहरु उधारोमा निर्माण गरिरहेको भन्दै उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा गुनासो गर्दा आफ्नो कर्म छोडेर अरुतर्फ लागेको भन्दै यसलाई ‘आफैंले बेसाएको दुःख’ भनेर उनीहरुको आलोचना हुँदै आएको छ ।
कलाकारिता छोडेर अन्य काम गर्दा उनीहरुको मुख्य कर्ममा कत्तिको असर गर्छ ? भन्ने प्रश्नमा दीपकराज गिरी भन्छन्, “यसमा मैले धेरै समय दिने होइन । होस्ट मात्रै गर्ने हो । अरुले रिसर्च गरेर ल्याएको र स्क्रिप्टेड कन्टेन्टलाई होस्ट मात्रै गर्ने हो । टिममा रहेका साथीहरुलाई के-कस्तो छ भनेर कहिले काहीं सोध्नु-भेट्नु फरक पाटो हो । तर, यसमै मैले पूरा समय दिने होइन ।”
आफ्नो मुख्य कर्म अहिले चलचित्र नै भएको उनी स्पष्ट पार्छन् । चलचित्र नै आफ्नो मुख्य गन्तव्य भएको उनको भनाइ छ । आफ्नो करिअर नै टेलिभिजनबाट सुरु भएको र रेडियोमा अहिले पनि कार्यक्रम चलाइरहेको भन्दै दीपक भन्छन्, “मेरो करिअरको सुरु नै टेलिभिजनबाट भएको हो । रेडियो कार्यक्रम आजका दिनसम्म पनि चलाइरहेको छु । आज स्टारडम छ भन्दैमा मैले मेरो सुरुवात भुल्नु हुँदैन ।”
चलचित्रमार्फत आफ्ना दर्शकमाझ जान डेढ-दुई वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसको दूरी ‘क्राइम पेट्रोल’ ले घटाउने उनको विश्वास छ । आफ्नो मुख्य कर्मलाई नजरअन्दाज गर्दै कुनै कलाकारले अरु नै क्षेत्रलाई प्राथमितामा राखे त्यसको असर पर्दामा देखिने भन्दै यसमा सजग हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
निर्देशक नवीन सुब्बा एकपछि अर्को कलाकार टेलिभिजन कार्यक्रम होस्ट गर्न गइरहनुलाई आफूले कलाकार फुर्सदिलो बनेको रुपमा बुझेको बताउँछन् ।
कोरोनाका कारण सम्पूर्ण काम ठप्प हुँदा आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा हतास मनस्थितिको उपज पनि हुनसक्ने यद्यपि यो समयलाई आफू परिस्किृत हुने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
“यो समय आफूलाई इनह्यान्स गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नसक्नु पर्थ्यो,” निर्देशक सुब्बा भन्छन्, “अभिनेताले अभिनय, लेखकले लेखन र निर्देशकले निर्देशनमा अध्ययन तथा परिस्कृत गर्दै लैजान यो समय खर्चिएको भए उपयुक्त हुनेथियो ।”
प्रायः अधिकांश हास्य कलाकार रेडियो अडियोमा लामो समयदेखि रेडियो कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन् । पर्दाका कलाकारहरु सञ्चारकर्मतर्फ आकर्षित भइरहेका बेला गायनमा रहेका कलाकारहरुले भने पर्याप्त समय दिननसक्दा गुणस्तरीय गायन र संगीत सिर्जना गर्न नसकिएको भन्दै गीत-संगीतमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छन् । सुगम पोखरेल, सत्यराज आचार्य, स्वरुपराज आचार्य, निर्णय श्रेष्ठ, भरत सिटौलालगायत गायकहरु अहिले सञ्चारकर्म छोडेर गायनमा मात्रै छन् ।
सुगम पोखरेल दुईतिर दिमाग चलाउनुभन्दा एकतिर केन्द्रित भए आफूले गर्न खोजेको काम राम्रो हुने बताउँछन् । “दुईतिर एकसाथ दिमाग लगाउनुभन्दा एउटै काममा केन्द्रित भएर काम गर्‍यो भने राम्रो काम गर्न सकिन्छ,” सुगम भन्छन्, “मैले रेडियो सगरमाथा छोड्नुको कारण पनि गीत–संगीतमा मात्रै केन्द्रित भए अझै राम्रो सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर छोडेको हुँ । दुईतिर काम गर्दा गरेको काम र एउटामा मात्रै केन्द्रित भएर गरेको कार्यमा ठूलो भिन्नता हुन्छ ।”
आफूलाई अहिले पनि रेडियो र टेलिभिजनबाट अफरहरु आइरहेको तर दुईतिर लाग्दा अपेक्षित सफलता कतै पनि पाउन नसकिने भएकाले अस्वीकार गर्दै आएको सुगम बताउँछन् ।
बिहीबार, फागुन १३, २०७७ मा प्रकाशित
#कलाकारलाई टेलिभिजनमा किन यति धेरै दिलचस्पी ?
एउटा ‘भाइरल’ गीत अर्थात ‘फुलबुट्टे सारी’ हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा गाउन सकिँदैन ?
चलचित्रमा विदेशी लगानी भित्रिए के हुन्छ ?
सरकार चलचित्रसँग डराउँछ ?
काठमाडौं । लयमा फर्किन नपाउँदै पुनः सिनेमा हल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सुरु... १४ घण्टा पहिले